Dimitar Berbatov oo saadaaliyay AFARTA kooxood kaalmaha sare kaga dhamaysan doono Premier League xili ciyaareedka cusub – Gool FM
(England) 26 Luulyo 2018. Waxaa bilaawatay in laga sii hadlo xili ciyaareedka cusub ee 2018/2019, gaar ahaan saadaalinta Premier League, maadaama uu yahay mid aad u xiiso badan.
Inkastoo Manchester City ay ugu soo guuleesatay xili ciyaareedkii lasoo dhaafay horyaalka Premier League xili ciyaareedkii hore si rikoodh cajiib ah, hadana waxaa wali la filayaa in loolan adag uu ku dhax maro kooxaha waaweyn ee dalka England.
Weeraryahankii hore ee kooxaha Manchester United iyo Tottenham Dimitar Berbatov ayaa aaminsan in afarta kooxood ee ugu sareysa Premier League aysan wax isbeddel ah ku imaan doonin xilli ciyaareedka cusub, laakiin dhanka farqiga dhanka kala sareynta ay wax iska bedeli doonaan.
“Afarta kooxood ee ku dhameysan doona kaalmaha sare ma jiraan wax iska badali doono sida xili ciyaareedkii hore, laakiin kaliya waxaa is badali doona farqiga dhanka kala sareynta”.
“Manchester United ayaa ku dhameysan doonta booska koowaad, kadib Tottenham Hotspur, Manchester City iyo Liverpool sidaas ayay u kala sareyn doonaan”.
Dimitar Berbatov ayaa xusid mudan labada kooxood uu kaga soo ciyaaray horyaalka Premier League uu u saadaaliyay in xili ciyaareedka soo aadan ee 2018/2019, ku dhameysan doonaan boosaska kaalmaha koowaad iyo labaad.
2- Tottenham Hotspur
Waxaa xusid mudan in xili coyaareedkii lasoo dhaafay dhanka kala sareynta ay afarta kooxood ugu sareysa ku dhameysteen Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur iyo Liverpool, sida ay u kala horeeyaan.
Dani Carvajal oo saadaal ka bixiyay saddexda xidid ee isugu soo hari doonta ku guuleysiga abaal marinta Ballon d'Or